Terbutaline (တာဗြူတလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Terbutaline (တာဗြူတလင်း)
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Terbutaline (တာဗြူတလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Terbutaline ကို အဆုတ်ရောဂါများ(ဥပမာ။ ။ ပန်းနာရင်ကြပ်၊လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊အဆုတ်လေခိုနာ၊COPD) ကြောင့် အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊အသက်ရှုလျှင် တရွှီရွှီမြည်ခြင်း စသည်တို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ ရောဂါလက္ခဏာများကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကြောင့် အလုပ်သို့မဟုတ် ကျောင်းပျက်ရခြင်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ Terbutaline သည် လေပြွန်များကို ကျယ်စေနိုင်သော သတ္တိရှိသဖြင့် အဆုတ်ထဲသို့ လေအဝင်အထွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ အသက်ရှုရလွယ်ကူစေခြင်းဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေသည်။
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Terbutaline ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Terbutaline ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ တစ်နေ့လျှင် ၃ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နှင့် ဆေးကိုတုန့်ပြန်မှုတို့အပေါ် မူတည်၍ ဆေးအချိုးအစားပမာဏ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့် အသက်၁၅နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများအနေဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ၁၅မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါ။ အသက်၁၂နှစ်မှ၁၅နှစ် အရွယ်ကလေးများအနေနှင့် ၇.၅မီလီဂရမ်ထက်ပို၍ မသောက်သင့်ပါ။ အသက်၁၂နှစ်အောက် ကလေးများအတွက်မူ နေ့စဉ်သောက်ရမည့် ပမာဏမှာ ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ဆေးကို ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်းအတိအကျ သောက်ပါ။ ပမာဏတိုးသောက်ခြင်း၊ အကြိမ်ရေတိုးသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ အကယ်၍ ဆေးကို နေ့စဉ်သောက်ရမည်ဆိုလျှင် ဆေးအာနိသင်အကောင်းဆုံးရနိုင်စေရန်နှင့် မမေ့စေရန် အချိန်တစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ပြီးသောက်ပါ။ အကယ်၍သင်သည် ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် အခြားသောက်ဆေးများ သို့မဟုတ် ရှုဆေးများလည်း သုံးစွဲနေရပါက Terbutaline နှင့် အဆိုပါ ဆေးဝါးများအား မှန်ကန်စွာ မည်သို့တွဲဖက်သုံးရမည်ကို သင့်ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
အကယ်၍ ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် သင်သုံးစွဲနေကျ ဆေးများသည် မူလကလောက် ထိရောက်မှုမရှိတော့ဟု ထင်လျှင်၊သင့်ရောဂါလက္ခဏာများ ပိုဆိုးရွားလာလျှင် သို့မဟုတ် မူလကထက် အကြိမ်ရေပိုတိုးပြီး သုံးစွဲရန် လိုအပ်မည်ဟုထင်လျင် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးဆွေးနွေးပါ။
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Terbutaline ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Terbutaline ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Terbutaline ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Terbutaline ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Terbutaline ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။Terbutaline ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Terbutaline ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
အသက်၁၂နှစ်အောက် ကလေးများတွင် Terbutaline ကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Terbutaline၏ အာနိသင် နှင့် အသက်အရွယ်တို့ ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိ စမ်းသပ်သုတေသန ပြုထားသော အချက်အလက်များမရှိပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အကယ်၍ အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက ဆရာဝန်ကို အမြန်အကြောင်းကြားပါ။
• ရင်တလှပ်လှပ် တုန်ခြင်း။
• မေ့လဲသွားတော့မည်ဟု ခံစားရခြင်း။
• ခြေ၊လက်များ တုန်ခြင်း
• ရောဂါလက္ခဏာများ မသက်သာခြင်း သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာခြင်း။
• ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်မပျော်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Terbutaline (တာဗြူတလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Terbutaline ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Terbutaline နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Terbutaline (တာဗြူတလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Terbutaline က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Terbutaline (တာဗြူတလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Terbutaline ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• နှလုံးရောဂါ၊နှလုံးသွေးကြော ရောဂါများ
• နှလုံးခုန်မမှန်သော ပြဿနာများ
• သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်အကျွံအလုပ်လုပ်သောရောဂါ …………………..အဆိုပါ အခြေအနေများတွင် သတိနှင့် သုံးစွဲပါ။ ရောဂါအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် (ရင်မကြပ်အောင် စွဲသောက်ရန်)
—>၅မီလီဂရမ် တစ်နေ့လျှင်၃ကြိမ်ကို ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရန် (အိပ်ချိန်များတွင် ထ သောက်ရန်မလို)။ အကယ်၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ သိသာလာလျှင် ၂.၅မီလီဂရမ် သို့ ပြောင်းနိုင်သည်။ (၂၄နာရီအတွင်း ၁၅မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ရပါ)
—>ရှုဆေးအဖြစ် သုံးလျှင် —>၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ဆေးကိုရှူပေးရန်။ တစ်ခါရှူ လျှင် စက္ကန့် ၆၀ စီခြားပြီး ၂ချက်ရှုပါ။ ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ထက်ပို၍ ဆေးကို မရှူပါနှင့်။
—>ဆေးပြား —->-၂.၅-၇.၅မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီခြား တစ်ခါ သောက်ရမည်။ ကိုယ်ဝန်သက် ၃၆ပတ် ၃၇ပတ် ရောက်ချိန်အထိ သောက်သွားရမည်။
—>ဆက်တိုက်အကြောသွင်းဆေး —-> 10-25mcg/min. ကလေးမွေးပြီးချိန်အထိ တောက်လျှောက်ပေးထားရမည်။ အများဆုံးပေးနိုင်သောပမာဏမှာ 80mcg/min ဖြစ်သည်။
—>အရေပြားအောက်ထိုးဆေး —-> ဝ.၂၅မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီခြားတခါ။ ကလေးမွေးပြီးချိန်အထိ တောက်လျှောက်ထိုးပေးရမည်။
ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် (ရုတ်တရက် ထ ကြပ်ခြင်းအတွက်)
–>ရှုဆေးအဖြစ် သုံးလျှင် —>၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ဆေးကိုရှူပေးရန်။ တစ်ခါရှုလျှင် စက္ကန့် ၆၀စီခြားပြီး ၂ချက်ရှုပါ။ ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတစ်ခါ ထက်ပို၍ ဆေးကို မရှူပါနှင့်။
—>အသားထိုးဆေးအဖြစ်သုံးလျှင် —-> ဝ.၂၅ မီလီဂရမ်ကို လက်မောင်းရင်းရှိ ပုခုံးကြွက်သားထဲ ထိုးရမည်။ လိုအပ်သေးလျှင် နောက်ထပ် ၁၅မိနစ်မှမိနစ်၃၀အကြာတွင် ဝ.၂၅ မီလီဂရမ် ထပ်ထိုးနိုင်သည်။ သို့သော် ၄နာရီအတွင်း ဝ.၅မီလီဂရမ်ထက် မပိုပါစေနှင့်။
—>ဆက်တိုက်အကြောသွင်းဆေး —-> 0.08 – 6mcg/kg/min
ကလေးတွေအတွက် Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
—>အရေပြားအောက်ထိုးဆေး —->0.005-0.01mg/kg/dose အချိုးအဆဖြင့် ၁၅မိနစ် မှ မိနစ်၂၀ခြားပြီး ၂ခါ ထိုးပေးနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ဝ.၄မီလီဂရမ်ထက် မပိုစေရပါ။
—>စက်ဖြင့်ဆေးရှုခြင်း —-> 0.01 –0.03mg/kg/dose နှုန်းဖြင့် အနည်းဆုံး ဝ.၁ မီလီဂရမ်၊ အများဆုံးအဖြစ် normal saline ၁-၂စီစီဖြင့်ရောထားသော ဆေးရည် ၂.၅မီလီဂရမ်ကို ၄နာရီ သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ပေးနိုင်သည်။
—>ရှုဆေးအဖြစ် သုံးလျှင် —>၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ဆေးကိုရှူပေးရန်။ တခါရှုလျှင် စက္ကန့် ၆၀စီခြားပြီး ၂ချက်ရှုပါ။ ၄နာရီခြား သို့မဟုတ် ၆နာရီခြားတခါ ထက်ပို၍ ဆေးကို မရှူပါနှင့်။
—>အရေပြားအောက်ထိုးဆေးအဖြစ်သုံးလျှင် —-> ဝ.၂၅ မီလီဂရမ်ကို လက်မောင်းရင်းရှိ ပုခုံးကြွက်သားဘေးဖက်ကို ထိုးရမည်။ လိုအပ်သေးလျှင် နောက်ထပ် ၁၅မိနစ်မှမိနစ်၃၀အကြာတွင် ဝ.၂၅ မီလီဂရမ် ထပ်ထိုးနိုင်သည်။ သို့သော် ၄နာရီအတွင်း ဝ.၅မီလီဂရမ်ထက် မပိုပါစေနှင့်။
—>ဆေးပြား—>0.05mg/kg/day ကို ၃ကြိမ်အညီအမျှခွဲတိုက်ရမည်။ 0.15mg/kg/day သို့ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅မီလီဂရမ်ထက် မပိုရ။
—>ဆေးပြား—>၂.၅မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီခြားသို့မဟုတ် ၈နာရီခြား သောက်ရမည်။ ၂၄နာရီအတွင်း ၇.၅မီလီဂရမ်ထက် မပိုရ။
—>ဆေးပြား—>၂.၅-၅ မီလီဂရမ်ကို ၆နာရီခြားသို့မဟုတ် ၈နာရီခြား သောက်ရမည်။ ၂၄နာရီအတွင်း ၁၅ မီလီဂရမ်ထက် မပိုရ။
သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Terbutaline (တာဗြူတလင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Terbutaline ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• ဆေးလွန်ခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း၊မမှန်ခြင်း၊ ရင်တလှပ်လှပ်တုန်ခြင်း။
• မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် သတိလစ်ခြင်း။
• မထိန်းနိုင်လောက်အောင် တကိုယ်လုံးတုန်ခါနေခြင်း။
Terbutaline ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Terbutaline https://www.drugs.com/cdi/terbutaline.html. Accessed July 15, 2016.
Terbutaline http://www.webmd.com/drugs/2/drug-12399/terbutaline-oral/details. Accessed July 15, 2016.
Terbutaline https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682144.html. Accessed July 15, 2016.